कात्तिक २३ गते शनिबार आजको राशिफल कस्तो छ हेर्नुहोस। – Life Nepali
कात्तिक २३ गते शनिबार आजको राशिफल कस्तो छ हेर्नुहोस।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने तथा पहिलेदेखि नउठेका रकमहरू उठ्नेछन् । समाजसेवामा जनतासँगै रहेर काम गर्न सक्दा नाम कमाउन सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ । माया प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । कन्फिडेन्ट पावर बढ्ने हुनाले पराक्रमी काम गर्न सकिनेछ । – तपाईँको दिन शुभ रहोस् ।
Previous कात्तिक २१ गते बिहीबारको कस्तो छ, तपाइको भाग्य राशिफल हेर्नुहोस् !
Next कात्तिक २४ गते आइतबार कस्तो छ तपाईंको भाग्य ? कुन राशिका लागि कति फ’लदायी ?